पुरुषहरुको पहिलो नजर महिलाको स्तनमा जान्छ, भने महिलाको नजर कता जान्छ ? | दर्पण दैनिक
पुरुषहरुको पहिलो नजर महिलाको स्तनमा जान्छ, भने महिलाको नजर कता जान्छ ?
प्रकाशित मिति: २०७६ कार्तिक २२ गते १०:२७
एजेन्सी । हरेक पुरुषहरुको नजर महिलाको स्तनमा जान्छ भने महिलाको भने पुरुषको आखामा जाने गरेको अध्ययनले प्रमाणित गरेको छ । यूनिभर्सिटी अफ ब्रिटिश कोलम्बियाले गरेको अध्ययन अनुसार, पुरुषको आँखाले महिलाहरूलाई सबैभन्दा पहिले र सबैभन्दा बढी आकर्षित गर्छ ।
त्यस्तै ब्रिटेन र साउथ अफ्रिकाको तीन यूनिभर्सिटीजको अध्ययनबाट पनि यो कुरा पुष्टी भएको छ । महिलाहरु यी अंग प्रति छिटै र धेरै आकर्षित हुन्छन । पुरुषहरूको आँखाले सबैभन्दा पहिले र सबैभन्दा बढी महिलाहरूलाई आकर्षित गर्छ ।
त्यसैले आँखालाई एकदमै स्वस्थ्य राख्नु आवश्यक छ । कपाल कुनैपनि पुरुषको कपाल कालो र चम्किलो छ भने महिलाहरु त्यस्ता पुरुष तर्फ आकर्षित हुन्छन् । दाँत र ओठ गुलाबी ओठमा देखिने मुस्कान र टलक्क टल्कने दाँतले पनि महिलाहरुलाई सहजै आकर्षित गर्छ ।
सफा छाला र चम्किलो छालाप्रति पनि महिलाहरु सजिलै भुतुक्कै हुन्छन् । यस तर्फ पनि पुरुषले ध्यान दिनुपर्छ । त्यसतै बाक्लो जुँघा र दाह्री प्रति पनि महिलाहरु छिटो आकर्षित हुन्छन् ।